Vokatra sy serivisy - JDL Global Environmental Protection, Inc.
Momba ny JDL
Fitsipika momba ny teknolojia FMBR
FMBR Patents sy loka
WWTP voafidy ambanivohitra
WWTP kalitao avo lenta (famoahana rano sy rano ambonin'ny rano)
WWTP voaangona mahomby
Taorian'ny fandrosoana efa ho 20 taona dia namorona andiana vokatra sy serivisy miaraka amin'ny teknolojia FMBR ary ivon-toerana ny orinasanay. Ny zavatra omenay anao dia tsy ny vokatray FMBR ihany fa koa andiana vahaolana amin'ny fitsaboana maloto efa mandroso sy matotra.
Fitaovana FMBR mifangaro
Izy io dia fitaovana fitsaboana be rano be mifangaro ao anaty rano, mila rafi-pitantanana, rafitra maloto ary asa sivily kely fotsiny hananganana WWTP, izay mahatonga ny asa fanamboarana ho tsotra sy haingana. Mety amin'ny trano fandraisam-bahiny, fanatanjahantena an-tsary, sekoly, taranja golf, seranam-piaramanidina, faritra varotra, faritra an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra, fitsaboana itsinjaram-pahefana sns.
Toeram-pitsaboana namboarina tatatra
Ireo fampitaovana miharo tena mifangaro dia tsy mila manampy afa-tsy ny rafitra fanamboarana ny rafitra fivoahan'ny rano sy injenieram-pirenena sivily kely hananganana tobim-panafody maloto, izay mahatonga ny fananganana ilay toeram-pitsaboana ho tsotra sy haingana. Izy io dia mety amin'ny scenario fampiharana marobe toy ny hotely, toerana mahafinaritra, distrika fivarotana sekoly, tanàna ary fizarana fizarana.
Serivisy fitsaboana ny maloto
Manana R&D matanjaka izahay, famolavolana injeniera, O&M, ekipa mpamokatra izay afaka manome vahaolana fanodinana rano maloto, famolavolana zavamaniry fitsaboana rano maloto, O&M famokarana rano maloto, famatsiana fitaovana ary famatsiam-bola ho an'ny rano maloto.
Vahaolana fitsaboana rano maloto
Famolavolana WWTP, WWTP O&M
Fampiasam-bola amin'ny tetikasa rano maloto
Mangataha vahaolana amin'ny rano maloto
Alefaso mailaka aminayinfo@jdlglobalinc.com
Antsoy izahay+1 9703088442
Adiresy244 Fifth Avenue, Suite Q222 New York, NY 10001